फोनमा एक मिनेट कुरा गर्दा २५ रुपैयाँ ! – Satyapati
फोनमा एक मिनेट कुरा गर्दा २५ रुपैयाँ !
हुम्ला । मोबाइल सेवा सबैतिर सहज र सस्तो भइरहेको बेला हिमालपारिको गाउँ लिमीमा फोनमा एक मिनेट कुरा गरेको २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ । टेलिकमले हालसम्म मोबाइल टावर नबनाउँदा भिस्याटबाट फोन गर्नुपरेपछि सर्वसाधारणले चर्को शुल्क तिरेर कुरा गर्नुपरेको छ ।
सेवाग्राही बलबहादुर लामाले नाम्खा गाउँपालिका–६ को हिमालपारिको लिमीको तीलगाउँमा नेपाल टेलिकमको भिस्याट फोनमा प्रतिमिनेट २५ रुपियाँ शुल्क लाग्ने गरेको बताए । दुर्गम स्थानमा उनले अहिलेको जमानामा पनि टेलिफोन सेवा धेरै महँगो भएको गुनासो गरे । शुल्क महँगो भए पनि आवाज स्पष्ट नसुनिने समस्या भने जस्ताको तस्तै छ ।
सोलारबाट सञ्चालनमा आएको टेलिफोन सेवामा एक मिनेट २० सेकेन्ड भए ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गर्छ । टेलिफोन सेवा सञ्चालक कुञ्जोकछिरिङ तामाङले सोलारबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएका कारण टेलिफोनको शुल्क महँगो भएको बताए । कुरा गरेको प्रतिमिनेट २५ र आगमन कलको १० रुपैयाँ शुल्क लिने गाउँको निर्णयबाट भएको हो ।
यसैबाट टेलिफोन सञ्चालकलाई पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । चीनको ताक्लाकोट अन्य विदेशमा फोन गर्नुपरे प्रतिमिनेट ८० रुपैयाँ लाग्छ । पाँच वर्षअघि साविकको गाउँ विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा भिस्याट टेलिफोन सेवा स्थापना भएको थियो । सञ्चारको अन्य माध्यम नभएको तीलगाउँमा भिस्याटमात्र घाम लागेको बेला सञ्चार सम्पर्क गर्ने माध्यम भएको छ ।
स्थानीय राङ्डोल तामाङले लिमीका लागि टेलिकमले मोबाइल टावर स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको भए टेलिफोन सेवा यति महँगो नहुने बताए । लिमीका तीन गाउँका लागि मोबाइल टावर राख्ने भनेको तीन वर्ष भए पनि हालसम्म स्थापना हुनसकेको छैन । लिमीका अन्य दुई गाउँ जाङ र हल्जीमा पनि भिस्याट टेलिफोन सञ्चालनमा रहेको छ ।